နွယ်ရှင်….သူစိမ်း……သို့……( sharon ) – PoemsCorner
နွယ်ရှင်….သူစိမ်း……သို့……( sharon )
ကြယ်ခါးတွေ တယုတယ လင်းတဲ့ ည
အဲ့ဒီ ညနက်ထဲပဲ နှင်းထူထူဟာ
မှုန်ဝါး တဲ့ ငါ့ရပ်တည်မှုကအလွမ်းသံသက်သက်နဲ့
အရိပ်လေးက ခပ်မှောင်မှောင်မှာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်
တွေးကြည့်ရုံနဲတင့် ရင်ခုန်သံကိုမြန်စေ….. မြန်စေခဲ့ပေါ့..။
သူ့ အသက်ရှုသံတွေကိုပဲ ပြန်ပြန်မြင်ယောင်
သူ့အသက်ရှူသံလေးပဲ ငါ့အသက်ရှင်သန်ခြင်း ဖြစ်နေခဲ့ရ….။
ခုချိန်မှာ ငါတို့ သူစိမ်းတရံမဆန်သင့်တော့တာ တကယ် ။။
5:25 pm (9.1.2012 )
In: ကဗျာ Posted By: sharon myorr myor Date: Jan 9, 2012
“ကျေးဇူးချစ်သူ” (sharon )
အယူခံ ခြင်း (sharon )
ဟန်နီ…..( sharon )
လမ်း (sharon )
Leave comment 18 Comments & 556 views
By: ရွှေကြယ်မိုး at Jan 9, 2012
နွယ်ရှင်ဆိုတာ ကျောင်းဆရာကြီး အဲ ကြောက်စရာကြီးဗျနော် မsharon တော့မသိဘူး ကျွန်တော်တော့မြင်ဖူးတယ် အစိမ်းရောင်နွယ်တစ်မျိုးပဲ ဖရုံရွက်တွေနားမှာရှိတတ်တဲ့နွယ်လိုမျိုးဘဲ ဒါပေမယ့် သူကလှုပ်နေတာဗျ ငြိမ်မနေဘူး သူများကဗျာမှာ စကားလာများသလိုဖြစ်သွားရင် sorry ဗျာ
ကဗျာလေး ကောင်းတယ် ရှေ့ကကဗျာတွေကတော့ပိုမိုက်တယ် မsharon ရဲ့ကဗျာတော်တော်များများမှာ မမြင်ဖူးတဲ့ စကားလုံးအဆန်းတွေတွေ့ရတယ်ဗျ ဒါကြောင့် အရေးအသားတွေကိုလေးစားလျှက် ကဗျာလေး ခံစားအားပေးသွားပါတယ် ။
By: X - ray at Jan 9, 2012
so funny,ko x-ray
every living things have movements & emotions,
so ,,,,it is strange?
ma myor,,i like so much ur poems,
this kind-hearted & loveable poem too.
By: taryar at Jan 10, 2012
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 10, 2012
By: poem.poem28 at Jan 10, 2012
By: မေပျိုခင်အတိတ်အလွမ်း at Jan 10, 2012
By: terry at Jan 10, 2012
စကားလုံးတွေ အမြင်အရ ယိုင် နေတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ယိုင် နေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်တွေ ယိုင် နေတယ်၊ ရပ်တည်မှု တွေ ယိုင်နေတယ် . . အဲဒီ ယိုင်နေတာတွေနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် တည်ဆောက်လိုက်တော့ ကဗျာဟာ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းဆိုတဲ့ ခပ်ကျဲကျဲခေါင်ရည် တစ်ခွက်ကို ကျနော်တို့ အတွက် ထားခဲ့တယ်။ ခပ်ယိုင်ယိုင် နှလုံးခုန်သံတွေကို စားပွဲ လုပ်ပြီးတော့ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သိမှုတွေ ယိုင်နဲ့ စေဖို့ပေါ့။ ပြီးတော့ ကဗျာဆရာမ ဟာ ဖျားနာခြင်းဆိုတဲ့ ၀တ်ရုံကို ၀တ်ပြီး သူစိမ်းဆန်တဲ့ ဂြိုလ်တွေဆီ စတင်ခရီးထွက် ပျံသန်းဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တယ် . . .
ဒါပေမယ့် . . သူ့ခြေထောက် ကို လှမ်းဆွဲထားတာတွေက နွယ်ရှင်တွေ . . .
အရိပ်တွေ ရဲ့ နွယ်ရှင်တွေ . .
နွယ်ရှင်တွေ ရဲ့ အရိပ်တွေ . . .
. . . နွယ်တွေမှာ ရှင်သန်မှု တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ် . .
ရှင်သန်မှု တစ်ခုအတွက် (၀ါ) တစ်ခုရဲ့ နွယ် တွေ . .သူ့ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ် . . .
ကဗျာဆရာမ ဟာ ကဗျာဆုးခါနီး မှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို လှမ်းပြောလိုက်သလိုလို၊ ကဗျာထဲက ဇာတ်ကောင် ရဲ့ ချစ်သူကို လှမ်းပြောလိုက်သလိုလိုနဲ့ . ကဲ . . .
By: သက်တင် at Jan 11, 2012
ကဗျာရေးသူနဲ့ ကဗျာဖတ်သူတစ်ထပ်တည်းကျဖို့ ခဲ့ ရင်းလို့ 
By: kathitni1980 at Jan 11, 2012
By: Han paing Oo at Jan 11, 2012
read again par
By: ei lay at Jan 11, 2012
မျော် ဟာ ကဗျာ..ကဗျာ ဟာ မျော်ပါ…ထာဝရ အားပေးလျက်..
By: zombie at Jan 11, 2012
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျ …အားလုံးကို..
အကြံညဏ်တွေ ဆက်လက်ပေးစေလို ပါတယ်ဗျာ…
By: sharon myorr myor at Jan 13, 2012
@ ကိုရွှေကြယ်မိုး –ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..
@ကို..x-ray နွယ်ရှင်ကိုမျောလည်းမြင်ဖူးတယ်ဗျ..လှုပ်လှုပ်နဲ့ ဗျ..ကြောက်စရာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ…ချစ်စ၇ာလေးတွေ ..:)..အားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
@ အိ….အမြဲတမ်းရဲ့ အမှတ်ရစရာပေးတတ်တဲ့ အိ..ကျေးဇူး.
@ ကိုတာရာ..မှန်တယ်ဗျ ..ဖြတ်ဖို့ ခက်တာမဟုတ်ဘူးးးဖြတ်ကိုမရတာ..
@ poem.poem28 ..ငရဲလေးကိုလဲကျေးဇူးတင်လျှက်အမှတ်ရနေပါတယ်
@ မေပျိုခင်အတိတ်အလွမ်း….thanks ပါ
အမ နင့် ကဗျာကိုမျှော် နေတယ် ..လူလုံးထွက်ပြပါအုံးကွ..ဒိရတယ်…
@ သက်တင်….ဆြာညို..လေးစားတယ်ဗျာ….ကွန် မန့် ပေးထားတာတကယ်ကြွေမိတယ်..အကြံညဏ်
တွေ ပေးစေလို ပါတယ်
@kathitni1980..ကိုမင်းလူန ..မျောလေးစားရတဲ့ ဆရာကမျောကိုအားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြောပါရစေဗျာ..
@့Han paing oo.. thanks
thanks again ei4read again poem 🙂
@ zombie ..ချစ်ခင်ရတဲ့ tu ni အားပေးမှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားနေပါတယ်..ကျေးဇူးနော်..သူငယ်ချင်း